Waa Maxay Godka Madoobi? |
Tuke Somalism — April 12, 2019
Godka madoobi - The black hole
Prof Falcke ayaa aragtida mashruucani ay ku dhalatay markuu ahaa ardayga ee uu diyaarinayey shahaadadiisa PHD sanadkii 1993, waagaas cidina uma haysan wax dhici kara. Laakiin waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyey ee ogaada in nooc kamid ah mawjadaha radio-gu ay ka samaysmi karaan meel u dhow iyo hareeraha godka madow, kuwaas oo awoodooda ay dareemi karaan teleskoobayada dhulka yaallaa.
Waxa kale oo uu xasuustaa in uu qoraal sayinis ka akhriyey 1973 in maadaama oo cuf jiidadkoodu wayn yahay in godadka madoobi 2.5 goor ka muuq weyn yihiin xajmigooda dhabta ah.
Labadaa arimood ayaa wixii aan wax suurto galaya loo haysani ka dhigay inay noqdaan suurto gal. labaatan sano ka dib markuu aragtidiisa soo bandhigay Prof Falckle waxa uu ku qanciyey golaha cilmi baadhista midowga yurub in ay mashuurcan maal geliyaan. Hay’adda qaranka ee sayiniska iyo haya’do kale oo bariga Aasiya ku yaal ayaa iyaguna markii dambe maalgelinta mashruuca ka qayb galay oo waxay ku bixiyeen £40 milyan iyo dheeraad.
Waana maal gelin natiijadan soo baxday lagu iloobayo. Prof Flcke ayaa ii sheegay inuu dareemayo “inay tahay hawl dhamaystirantay”.
Wuxu yidhi “socdaal dheer buu ahaa laakiin waxani wuxu ahaa waxaan doonayey in aan indhahayga ku arko. Waxaan doonayey in aan ogaado ma xaqiiq baa?”
Teleskoob keli ahi siduu doono ha u awood batee muu sawiri karayn godka madow, sidaa awgeed ayaa waxa la bilaabay tijaabadii ugu weynayd ee nooceeda ah, Prof Sheprd Doeleman oo ka tirsan xarunta Smithsonian ee jaamacadda Harvad ee cilmiga Astrophysics ayaa hormuud u ahaa mashuurca isku xidhayey sideed teleskoob. Waxaana shabakaddaa loo bixiyey Event Horizon Telescop waxaana lagu sheegi karaa suxuuntooda marka la isku daro in ay bedka dhulka leegyihiin.
Mid walba waxa la dhigay meel taag ah oo fog, oo ay ka mid yhiin buuraha fulkaanuhu ka qarxo ee Hawaii iyo Mexico, buuraha Arizona iyo kuwa Spanish Sierra Nevada, lamada degaanka Atacama ee Chile iyo Antarctica. Koox sayinisyahanno ah oo ka kooban 200 ayaa teleskoobyadaa ku jiheeyey bah-meeraha M87 oo badhtamihiisa sawirayey muddo 10 maalmood ah.
Xogta ay soo ururiyaan oo aad u badnayd awgeed internet-ka laguma diri karayn oo waxa lagu kaydiyey boqolaal cajaladaha la yidhaa Hard Drive, waxaana loo diray xarumaha lagu axadhayo xogtaas oo ku kala yaal Boston oo Maraykanka ah iyo Bonn oo Jarmalka ah. Katie Bouman oo ah ardayad diyaarinaysa PhD oo dhigata jaamacadda MIT ayaa waxay hindistay hab xogtaa la soo ururiyey lagu axadhayo. Hindiseheegaa la’aanteed mashruucu muu hir galeen. Prof Doeleman ayaa xogtaa la helay ku tilmaamay “guul aan caadi ahayn oo sayinis”.
“Waxaanu gaadhnay waxa loo haystay in aan la gaadhi karin sannado ka hor” ayuu yidhi.
“Horumarka tiknoolajiyada, isku xidhka teleskoobyada dunida daafaheeda kala yaa iyo qorshaha casriga ah ee gabadhu hindistay ayaa dhamaantood markay isku yimaadeen furay daaqad cusub oo laga dheehan karo godadka madow”.
Kooxdu waxay is waydiinaysaa in uu jiro god madow oo wayn oo ku yaal bu’da bah-Meeraheena la yidhaa Milk Way. Wax aan maan gal ahayn baa la moodaa, laakiin arintaa haatan la ogaaday ayaa ka adkayd oo ah in sawir laga qaado bah-meere 55 milyan oo sannad ilays inaga fog. Sabab aan la garanayn awgeed na, “goobada dabka ah” ee ku gadaaman godka madow ee ku yaal Milk Way ayaa aad uga yar oo ka iftiin yar kan haatan la helay.
Tags: Waa maxay godka madoobi?
Next post Waa Maxay Duumo, Sidee Looga Hortagaa Duumada?
Previous post Sawirkii ugu Horreeyay Abid oo Laga Qaaday Mucjisada Godka Madow ee Hawada Sare